Yeyiphi laptop Apple MacBook I kufuneka uthenge? - News umthetho
UMariya idinga indawo yakhe 2009 MacBook Pro kodwa ngenxa iinketho lwazigubungela. Yeyiphi indlela engcono?
Eli nqaku obizwa “Yeyiphi laptop Apple MacBook I kufuneka uthenge?” yabhalwa ngu uJack Schofield, ngokuba theguardian.com ngoLwesine 15 Novemba 2018 10.00 i-UTC
Mna soldiered ku nge 2009 MacBook Pro, leyo sebenzisa ufikelelo internet, kwimidiya, photos, nophando yam. Kodwa ukuze ufikelele kwithala eyunivesithi ukude, Kufuneka usebenzise i phezulu-ukuya-umhla kwindlela yokusebenza, and Mac yam yaluphele ngoko ke akusekho kuyihlaziya.
ke, Ndifuna ukuthenga MacBook entsha, kodwa mna ngenxa iinketho uxakwe. Ingaba Kufuneka Bar Touch? Indlela imemori kunye SSD Kungakanani I kufuneka? uMariya
Ukulandela le imveliso ukuvuselela ku 30 EyeDwarha, Apple uye MacBooks ezine kwenza lukhulu umsebenzi ofanayo. Iindaba ezimnandi zezokuba, ukuba uyakwazi ukuphila kwi 2009 MacBook Pro, ngubani na kubo oza kuba omhle iinjongo zakho. Iindaba ezimbi zezokuba bonke ezineefitsha ezaziza bandifake kude uzithenge, nakuba, nge luck, ke akayi kubeka wena off.
kunjalo, Mna ndicinga ukuba kubalulekile ukutyelela i-Apple Store okanye enye stockist ukuze bakwazi ukuthelekisa ubuncinane ezimbini MacBooks icala 13 ecaleni. Yiyo leyo MacBook Air endala (best ikhibhodi, okubi screen) kunye MacBook Pro (embi ikhibhodi, screen ezinkulu).
Ndiyakwazi kukuxelela ukuba yeyiphi chips ngokukhawuleza, kwaye nangokunjalo, kodwa yakho iya kulawulwa yi umgangatho yezitshixo kunye screen. Isithuba blog Awuyazi uthanda ukuba zeziphi na, okanye apho ungathanda ukwenza imibono.
Zonke laptops ezintsha Mac beze Apple kaThixo ezisezantsi-umdla butterfly yezitshixo, eye yazibonakalisa iyantlukwano. Thatha: Samuel Gibbs for the Guardian
Ukwenzela mna, eyona ngxaki inkulu kunye MacBooks entsha keyboard ibhabhathane, leyo yaziswa kuqala nge 12e MacBook ngo 2015. Inguqulelo yesibini wabonakala MacBook kwizazi, apho kukho inani abasebenzisi ukwehluleka ikhibhodi ngenxa uthuli okanye detritus ukufumana phantsi izitshixo. Le MacBooks zamvanje uguqulelo sesithathu ukutywina engaphezulu ukugcina ngaphandle eluthulini. Kusafuneka sibone ukuba limi ngayo ngokuhamba kwexesha.
Ngaphandle kwaloo nto, Ndifumana keyboard ibhabhathane inikezela ngamava embi typing. Ndafunda ukuba bachukumise-uhlobo kwi oomatshini bokuchwetheza, kwaye ukhetha keyboard ngamaqhosha mechanical kunye omninzi yokuhamba. keys Butterfly babe phantse wayengenazo. Oku kuya tyhala nam ukuya MacBook Air endala, ene-keyboard elungileyo kakhulu ngokwemilinganiselo laptop.
Okubuhlungu, i MacBook Air ubudala ezinye iingxaki. Ukuthi ngqo, iphedi kunye screen zimbi ngaphezu kwabo kwi entsha MacBook Air. (Andiwaboni embi, kodwa azikho mgangathweni.)
Okuvuyisayo kukuba, ancume. Abanye abantu bakhetha flat, ikhibhodi angasabeli, yaye uya kufumanisa ukuba ngathi ibhabhathane yezitshixo. Ukuba kunjalo, kwenza ukhetho lwakho lula. Ndicinga nje kufuneka ayinike kudlule kakhulu - ukuchwetheza amagama amakhulu ambalwa kuyo - ngaphambi kokuba senze ekusebenziseni kuyo imihla yonke yonke imihla ... okanye ethwele yangaphandle USB ikhibhodi emhlabeni.
touch Bar? Hayi
I-Touch Bar ithatha indawo F izitshixo kwi MacBook Pro. Thatha: Samuel Gibbs for the Guardian
Wena Awudingi Bar Touch. Inyaniso, akukho namnye ngokwenene udinga Bar Touch. Ngolunye uhlobo, ukuba zifakwa kuphela eninzi kakhulu MacBook kwizazi, kwaye bacinga ukuba unomdla ukuthenga MacBook kakhulu ibiza ngaphezu ufuna.
the 13phakathi ku-2009 MacBook Pro waba Intel Core 2 duo iprosesa, into ebuhlungu ngemilinganiselo yanamhlanje. Umfuziselo Isiseko kuphela 2GB of memory (esongwayo ku 8GB) kunye 160GB hard drive, nangona upgrades siko yayiquka 128GB and 256GB SSDs. Le MacBook kunazo unako ukuthenga namhlanje uya kuba ukucaciswa ngcono.
Ngelishwa, awukwazi uphuculo MacBooks yanamhlanje, ngoko ke kufuneka ukuba uthenge amandla kangangoko ngonaphakade kuya kufuneka. ngokuba ende, kuya kuba ngcono ukuba 16GB of inkumbulo kunye 256GB okanye SSD enkulu, kodwa Apple uwunike imali enkulu ngenxa ezi ukulungiswa.
Ngethamsanqa, MacBooks ubambe ixabiso labo kakuhle, ngoko ke enye kukuba ukuya kuba zezirhubuluzi isiseko kunye, Ukuba uthe wabufumana ufuna amandla angaphezulu, ekulithengiseni kwaye thenga elitsha.
I MacBook usebenzisa iziqhubekisi ezisezantsi-amandla Intel kaThixo. Thatha: apile
Kukho ingxaki non-ezicaceleyo ukuba ezimbini MacBooks zakho baye Core M Intel esixhasiweyo, apho bayekelele nesantya ukunika ubomi bebhetri engcono. Apple wazama kuqala oku 1.1GHz ezimbini-core M-5Y31 chip esetyenziswa kwi 2015 MacBook (12esikrinini). namhlanje, chips M Core zisetyenziswa nje kuphela MacBooks 12in, kodwa kwi MacBook yaziphakamisa yakutshanje.
Yinto ayicacanga kuba Intel watshintsha Iwawo nokuthiywa. Abantu basenokuba bedinyazwa "Core M" uphawulo mhlawumbi ngeke uphawule ukuba ukufumana Y series chip - ngqo, a i5-8210Y core - endaweni enamandla ngakumbi U chips uthotho ezisetyenziswa laptops eziqhelekileyo.
Andinanto nxamnye Core M / Y series chips, kunye yam 8GB / 128GB touch-screen Lenovo Yoga 700 kuye efanayo Core M3-6Y30 ezisetyenziswa kwezinye MacBooks. Umahluko kukuba oko umatshini ukusetyenziswa nje / iholide, ohlelo yam engundoqo kwaye kuphela endiwazuze £ 339,99. Bendingayi athenge enye kumatshini yam main, yaye zibiza £ 1,200 kuba mnye etyeni.
A i5-8210Y Core kufuneka ngokukhawuleza ngokwaneleyo kuba kufikile ukukhanya kwakho usebenzisa - nto leyo ikhule ngokuhamba kwexesha - kodwa iseyi ixabiso ihlwempu imali MacBook Air.
Apple kaThixo MacBook Air endala. Thatha: Simon Lees / Future Publishing / Rex
Apple iye yaqinisekisa ukuba i-13 MacBook Air endala, kwaye kukhangeleka ixabiso ilungileyo imali £ 949, nakuba yesihlanu-isizukulwana Core i5-5350U iprosesa non-retina screen yayo. Ibe, ngokubona kwam, ikhibhodi best, kwaye ise- amazibuko elungileyo lixesha, kuquka i slot ikhadi SD kunye isinxibelelanisi magsafe. Kuzo zonke ezinye iinkalo, entsha MacBook Air (2018) uphakeme kakhulu.
Le MacBook endala 12in isekhona ekhoyo, kodwa underpowered kunye overpriced, nenguqulo 1.2GHz Core M3-7Y32 (2017) enza £ 1.249. Isizathu kuphela kokuqwalasela lo matshini kukuba yiloo amancinane elula (0.92ikg) MacBook ungakwazi ukufumana.
I entsha 13 MacBook Air mncinci ngokukhanya ngaphezu uguqulelo oludala, has a screen kude kunathi, yakhula amandla ukuchukumisa iguqule, kwaye izithethi engcono. Kwakhona imali eninzi kakhulu kwi £ 1,199. Kubakho iingxaki ziquka keyboard ibhabhathane kunye Core M / Y series iprosesa.
Ekugcineni, kukho i MacBook Pro 13 ngaphandle Touch Bar (yee-2017), ebonelela a ngokukhawuleza lwesixhenxe-isizukulwana i5 2.3GHz Core (7360the) iprosesa, imizobo ngcono kakhulu kwaye ngcono umbala Unikezelo extra £ 50, ie £ 1.249. I Pro unalo screen eliqaqambileyo - 500 noonomoyi kunokuba 300 oonomoyi - ekufuneka ibe ngcono kakhulu ukusetyenziswa yangaphandle. Ulahlekelwa imilo nesinqumka i Air kaThixo, leyo ukhululeke ngakumbi alinawo, kodwa Pro ayikho inzima kakhulu ngaphezu Air entsha (1.37kg vs 1.25kg).
Ndingathanda i MacBook Pro ngakumbi ukuba waba keyboard endala Air, kodwa kubonakala kum yeyona Wothenga wena kakuhle - xa ungakwazi ukuhlawula. Ndiba ke ndinaye ukuba ukubheja kwakho kakhulu uhlaziyo system yokusebenza elizayo.
ngcono ukuba, njengoko kuchaziwe, ezibizayo. Ukwandisa Pro i-8GB of enkumbulweni 16GB kubiza £ 180, kunye nokuphucula i 128GB SSD ukuya 256GB kubiza £ 200, ngoko spec ufuna nyani kubiza £ 1.629. Ukongeza AppleCare ungqubeka ixabiso ukuya lokugqibela £ 1.878.
Ku va ni eninzi imali, kodwa bacinge ukuba £ 1 ngosuku kwiminyaka emihlanu kwaye aliyi kuba embi kangako.
Njengoko umfundi onesidanga, kufuneka kufaneleka ukuba afumane isaphulelo lemfundo, oya kuzingenisa phantsi ixabiso. Khangela ukuba ukufumanisa ukuba eyona nto ingcono ukwenza oku nge eyunivesithi yakho, online, okanye i Ivenkile Apple.
Apple inika urhwebo-ngemvume kwizixhobo endala nge yayo Buyisa scheme. Awuyazi indlela ungazakufumana ngaphandle inani lothotho inani MacBook Pro yakho. Ku mhlawumbi hayi okuninzi, kodwa ubuncinane lempi ubudala ukuze isetyenziswe ngokufanelekileyo.
10418	3 Yeyiphi laptop Apple MacBook I kufuneka uthenge?
← OnePlus 6T Review the 20 zobuchwepheshe best 2018 →